ကိုရို နာ ဗိုင်းရပ်စ် ဟာ လက်ပေါ် မှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ အသက် ရှင် နိုင် လဲ? – Cele Posts
ဒါအရေးကြီး တဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ခဏခဏ မေးကြတဲ့ မေးခွန်း ပါ။ လက်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ အသက်ရှင် သလဲသိမှ ရောဂါ ဘယ်လို ကူးလွယ် သလဲ သိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက အမေရိကန် က သုသေသ နပညာရှင်တွေက အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ အသက်ရှင်သလဲ စမ်းသပ် ခဲ့ပေမယ့် လူရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ မစမ်းသပ်ခဲ့ပါ။ ဆေးပညာကျင့်ဝတ်အရ လူရဲ့အရေပြားပေါ်ကို ရောဂါပိုးတင်ပြီး စမ်းဖို့ မသင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ခြောက်တန်း တုန်းက ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ Microbes hunters ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုသွားသတိရပါတယ်။ မိုက်ခရိုစကုပ် ကို စထွင်ခဲ့ကာ ရောဂါပိုးကိုပထမဆုံး စတွေ့ခဲ့တဲ့ Leeuwenhoek တို့၊ Spallanzani တို့သာရှိရင် ကျိန်းသေကိုယ့်အသားပေါ်ကိုယ်တင်ပြီးစမ်းသပ်ကြမှာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံက Dr Ryohei Hirose ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ လူရဲ့အရေပြားကို autopsies ကယူပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကိုဗစ် ဖြစ်စေတဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တုပ်ကွေး Influenza A ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်စမ်းသ ပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် SARS-CoV-2 ဟာ လူရဲ့အရေပြား ပေါ်မှာ (၉.၀၄) နာရီကြာအသက်ရှင်နေနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Influenza A ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ (၁.၈၂) နာရီကြာအသက်ရှင်နေနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုဗစ် ဟာ Influenza တုပ်ကွေးထက်ပိုပြီးကူးစက်လွယ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ တုပ်ကွေးထက် ပိုပြီးဂရုစိုက်ကာ မကူးစက်အောင် သတိထား နေရပါတော့မယ်။
အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် SARS-CoV-2 ကို သဘာဝအတိုင်း လူတွေ ချောင်း ဆိုးနှာချေတဲ့ ပုံရအောင် လူရဲ့ချွဲအမှုန်နဲ့ ရောပေးကာ အရေပြားပေါ် တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ အဲ့လိုတကယ့်ချောင် ဆိုးနှာချေတဲ့ ချွဲအမှုန်လို ဖန်တီးပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် SARS-CoV-2 ဟာ သူရှင်သန်ဖို့အဟာရရတဲ့အတွက် (၁၁) နာရီကြာအောင် လူရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ အသက်ရှင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် SARS-CoV-2 ဟာ လက်ပေါ်မှာ ( ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ) အသက်ရှင် နိုင်တဲ့ အတွက် ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ လက်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ အဲ့ဒီလောက်ကြာကြာထိ တွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ အများကြီးပါ။ ကျနော်တို့လက်ပေါ်ပါလာရင်၊ အရေပြားပေါ်ကပ်ပါလာရင် (၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ) အသက်ရှင်နေနိုင် ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လက်ကိုမကြာခနဆေးဖို့ကအရေးကြီးလာပါပြီ။
အရေးကြီးတာက အဲ့ဒီသုသေသန မှာ လက်ကို အီသနော 80% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ ပိုးသန့်စင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ် တွေ သေကုန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လက်ကိုဆပ်ပြာ (သို့မဟုတ်) အယ်ကိုဟော 60% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်မကြာခဏ ဆေးပေးခြင်းဟာ ထိရောက်သော ကာကွယ်မှုတစ်ခုဆိုတာ ပိုပြီးသေချာလာပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ် ပမာဏကို ထည့်မစဉ်းစားပဲ #ရောဂါပိုးရဲ့ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုပဲ အဓိကသုသေသနပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သုသေသနပြုခဲ့ တာလည်း နမူနာ ၃ ခုပဲသုံးခဲ့တာမို့ စမ်းသပ်မှုအရွယ်အစားက သေးပါတယ်။
နောက်တခုက အခုလို forensic autopsy ကရယူတဲ့ လူ့အရေပြားနဲ့ သက်ရှိလူ ရဲ့ လက်ပေါ်တင်ကြည့်တာက ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ကိုရို နာ ဗိုငျးရပျဈ ဟာ လကျပျေါ မှာ ဘယျလောကျ ကွာကွာ အသကျ ရှငျ နိုငျ လဲ?
ဒါအရေးကွီး တဲ့ မေးခှနျး ဖွဈပါ တယျ။ ခဏခဏ မေးကွတဲ့ မေးခှနျး ပါ။ လကျပျေါမှာ ဘယျလောကျ ကွာကွာ အသကျရှငျ သလဲသိမှ ရောဂါ ဘယျလို ကူးလှယျ သလဲ သိမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျတုနျးက အမရေိကနျ က သုသသေ နပညာရှငျတှကေ အရာဝတ်ထုတှပေျေါမှာ ဘယျလောကျ ကွာကွာ အသကျရှငျသလဲ စမျးသပျ ခဲ့ပမေယျ့ လူရဲ့အရပွေားပျေါမှာ မစမျးသပျခဲ့ပါ။ ဆေးပညာကငျြ့ဝတျအရ လူရဲ့အရပွေားပျေါကို ရောဂါပိုးတငျပွီး စမျးဖို့ မသငျ့လို့ဖွဈပါတယျ။
ကနြျောခွောကျတနျး တုနျးက ဖတျဖူးခဲ့တဲ့ Microbes hunters ဆိုတဲ့ စာအုပျကိုသှားသတိရပါတယျ။ မိုကျခရိုစကုပျ ကို စထှငျခဲ့ကာ ရောဂါပိုးကိုပထမဆုံး စတှခေဲ့တဲ့ Leeuwenhoek တို့၊ Spallanzani တို့သာရှိရငျ ကြိနျးသကေိုယျ့အသားပျေါကိုယျတငျပွီးစမျးသပျကွမှာပါ။
ဂပြနျနိုငျငံက Dr Ryohei Hirose ဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့ဟာ လူရဲ့အရပွေားကို autopsies ကယူပွီး စမျးသပျခဲ့ကွ ပါတယျ။ ကိုဗဈ ဖွဈစတေဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုငျးရပျဈနဲ့ တုပျကှေး Influenza A ဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈတို့ကို နှိုငျးယှဉျစမျးသ ပျခဲ့ပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ SARS-CoV-2 ဟာ လူရဲ့အရပွေား ပျေါမှာ (၉.၀၄) နာရီကွာအသကျရှငျနနေိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီစမျးသပျမှုမှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ SARS-CoV-2 ကို သဘာဝအတိုငျး လူတှေ ခြောငျး ဆိုးနှာခတြေဲ့ ပုံရအောငျ လူရဲ့ခြှဲအမှုနျနဲ့ ရောပေးကာ အရပွေားပျေါ တငျပေးလိုကျ ပါတယျ။ အဲ့လိုတကယျ့ခြောငျ ဆိုးနှာခတြေဲ့ ခြှဲအမှုနျလို ဖနျတီးပေးလိုကျတာနဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ SARS-CoV-2 ဟာ သူရှငျသနျဖို့အဟာရရတဲ့အတှကျ (၁၁) နာရီကွာအောငျ လူရဲ့အရပွေားပျေါမှာ အသကျရှငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ SARS-CoV-2 ဟာ လကျပျေါမှာ ( ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ) အသကျရှငျ နိုငျတဲ့ အတှကျ ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ လကျနဲ့ ထိတှခေဲ့ အဲ့ဒီလောကျကွာကွာထိ တှခေဲ့တဲ့အရာတှဟော အမြားကွီးပါ။ ကနြျောတို့လကျပျေါပါလာရငျ၊ အရပွေားပျေါကပျပါလာရငျ (၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ) အသကျရှငျနနေိုငျ ပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ လကျကိုမကွာခနဆေးဖို့ကအရေးကွီးလာပါပွီ။
အရေးကွီးတာက အဲ့ဒီသုသသေန မှာ လကျကို အီသနော 80% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ ပိုးသနျ့စငျလိုကျတဲ့ အခါမှာ ၁၅ စက်ကနျ့အတှငျး ဗိုငျးရပျဈ တှေ သကေုနျတာ တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ လကျကိုဆပျပွာ (သို့မဟုတျ) အယျကိုဟော 60% ပါတဲ့ hand sanitizer နဲ့ အနညျးဆုံး ၂၀ စက်ကနျ့မကွာခဏ ဆေးပေးခွငျးဟာ ထိရောကျသော ကာကှယျမှုတဈခုဆိုတာ ပိုပွီးသခြောလာပါတယျ။
ဒီစမျးသပျမှုမှာ ရောဂါဖွဈနိုငျတဲ့ဗိုငျးရပျဈ ပမာဏကို ထညျ့မစဉျးစားပဲ #ရောဂါပိုးရဲ့ အသကျရှငျနိုငျတဲ့အခြိနျကိုပဲ အဓိကသုသသေနပွုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သုသသေနပွုခဲ့ တာလညျး နမူနာ ၃ ခုပဲသုံးခဲ့တာမို့ စမျးသပျမှုအရှယျအစားက သေးပါတယျ။